नेपाल आज | भीम रावलका कारण सुदुरपश्चिम एमालेमा खैलाबैला, माधब पक्ष बलियो !
भीम रावलका कारण सुदुरपश्चिम एमालेमा खैलाबैला, माधब पक्ष बलियो !
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिममा प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। नेकपामा हुँदा होस् या एमालेमा विवाद हुँदा सुदुरपश्चिममा उनी बलिया नै थिए।
उनले सुदुरपश्चिमका समर्थकका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै गए। रावल माधवकुमार नेपाल समूहमै रहेका कारण बहुमत सांसदहरू उनकै समूहमा रहेको विश्लेषण थियो। सुदरपश्चिममा रावलका कारण माधव नेपाल वलिया हुन की नेपालका कारण रावल वलिया हुन भन्ने दुविधा थियो । प्रदेश सभा र सरकारमा रावलको दवदवा थामिनसक्नु थियो ।
१५ चैतमा सम्पन्न नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने निर्णय गर्दा भीम रावलको असहमतीपछि एमाले सरकारमा टिकिरह्यो। बरु सरकार पुनर्गठनमा एमालेले थप भाग पायो ।
१० जेष्ठमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि प्रदेश सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। तर, केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै रावलकै वलमा २५ जेठमा एमालेका १७ सांसदले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिए ।
प्रदेशमा एकलौटी वर्चस्व जमाउँदै आएका रावल एमाले विभाजनपछि भने निकै कमजोर देखिन थालेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रावलको एकलौटी छ’ भन्ने गरेका विश्वास पात्रसमेतले साथ छोडेपछि रावलको प्रभाव कमजोर वनेको हो ।
लामो समयसम्म वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग रहेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचना गर्दै आएका रावल अन्तिम समयमा उनै ओलीको समूहमा पुगे। तर, ओलीतिर लाग्दा भने उनको त्यो शक्ति देखिएन । वरु उनका कारण सुदुरपश्चिम एमालेमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
भीम रावलका हनुमान भनेर चिनिनेहरु नै रावललाई धोकेबाज भन्न थालेका छन् । अहिले रावलसँगै ओलीतिर लाग्नेमा सङ्घीय सांसदमध्ये झपट रावल मात्र छन्। प्रदेश सभा र सरकारमा समेत उनी कमजोर देखिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख सहित २५ सांसद रहेको एमालेमा तत्कालीन अवस्थामा ८ जना केपी ओली पक्ष र १७ जना माधव समूहमा खुलेका थिए।
तर, रावल एमालेमै फर्कँदा भने उनी आफ्नै क्षेत्रमा कमजोर देखिए। प्रदेश सभा सदस्य अमर साउद, बलबहादुर सोडारी, कृष्णराज सुवेदीले पनि रावलको साथ छाडेका छन्। प्रदेश सरकारमा एमालेबाट अहिले चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन । उनीहरूमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले मात्रै रावललाई खुलेर साथ दिएका छन्। रावल निकट मानिएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व मन्त्री माया भट्ट नेपालको नेकपा (एकिकृत समाजवादी) तिर लागेका छन् ।
रावलको गृह जिल्ला अछाम हो । रावल एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक हुँदा अछाम जिल्ला अध्यक्ष रहेका शेरबहादुर कुँवरलाई रावलको विश्वास पात्रको रुपमा लिने गरिएको थियो । उनी अन्तिम समयसम्म रावलको साथमा थिए । ओली पक्षले नेपाल समूहलाई साथ दिएको भन्दै उनलाई जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट समेत हटाएको थियो । रावलकै जोड बलमा उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित गराइएको थियो । तर, उनले समेत अहिले रावलको साथ छोडेर एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् ।
कुँवरलाई अछाममा बलियो जनाधार भएको नेताको रुपमा चिनिन्छ । ०६४ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एमालेका तीन नेता मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा एक कुँवर नै थिए। तर, उनले समेत साथ छोडपछि रावल आफनै क्षेत्रमा कमजोर भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र हर्क बहादुर कुँवर रावल पक्षमा देखिएका छन्। भीम रावललाई आदर्श मान्ने लक्ष्मी चौधरी जस्ता नेताले अहिले उनलाई नेता मान्न छोडेका छन्। ‘उहाँले केपी ओली प्रतिगामी हो भनेर हामीलाई आन्दोलनमा ल्याउनुभो, हामी आन्दोलनमै छौं’ कैलालीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चौधरी भन्छिन्–‘उहाँले देखाएकै बाटोमा छौं, तर उहाँले वाटो विराउनु भो। त्यो वाटोमा लाग्न अव सकिंदैन।’
थाके भीम तर थाकिनन लक्ष्मी !
नेकपा एमाले भीम रावल सुदूरपश्चिम माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा ओली प्रदेशसभा